Gbasara Anyị | Hangzhou Powersonic Equipment Co., Ltd.
Rps-sonic, nke nwere ụmụ okorobịa na-eto eto hụrụ ultrasonic n'anya nke ukwuu. Ndị guzobere RPS-SONIC nwere akara ugo mmụta bachelọ ma ọ bụ karịa. Ha anọwo na ụlọ ọrụ ultrasonic maka ihe karịrị afọ 5 ma nwee ahụmahụ bara ụba na ultrasound. Nkà ihe ọmụma azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ: Ebula ngwaahịa ọ bụla n'ajụghị ase, chọta ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka onye ahịa ahụ. Ya mere tupu usoro ọ bụla, anyị ga-akwado nkọwa niile, gụnyere nkọwa ngwa, ọnọdụ akụrụngwa, ozi akụrụngwa.
Tupu afọ 2012, anyị na-ere nke abụọ branson / dukane / rinco / herrman / telsonic ịgbado ọkụ akụrụngwa, n'oge a iri abụọ na afọ ịzụlite, anyị na-ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ nwere nsogbu na isi akụkụ nke ultrasonic ịgbado ọkụ ngwá -generator na transducer, otú anyị kpebiri ịmalite azụmahịa anyị nke transducer na generator nke transducer na generator. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ njedebe izute transducer nsogbu, ha amaghị ihe mere transducer gbajiri, na-agbanwe agbanwe dị oké ọnụ transducer otu otu. N'ezie, otu branson / dukane / rinco transducer nwere ike iji 10 ~ 30 afọ, ọbụlagodi transducer dị ọnụ ala nwere ike iji ihe dịka afọ 5. N'ihi ya, ọ ga-abụrịrị ụfọdụ ihe kpatara ya ma ọ bụrụ na onye ntụgharị gị gbajiri n'otu afọ. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ iwu Rps-sonic, ọ dị mkpa ka anyị nyere ndị ọzọ njedebe aka ịmatakwu banyere transducer, iji ngwa ngwa ultrasonic ka mma, ịchekwa ego mgbe ị zutere nsogbu.
Otu ihe na generator, enweghị ezi uche ime ihe nwere ike mkpumkpu ojiji-ndụ nke ultrasonic generator. Ya mere, anyị ga-eme ịjụ ase oru tupu arụ ọrụ ultrasonic ịgbado ọkụ igwe. Isi ihe dị na igwe ultrasonic bụ resonance, naanị debe akụkụ ọ bụla na resonance nwere ike ime ka sistemụ rụọ ọrụ gburugburu ebe obibi kacha mma.
Ruo ugbu a, anyị ka nwere ọtụtụ Branson / dukane / rinco / herrman telsonic ịgbado ọkụ igwe, ka anyị wee nwee ike ikwenye na transducer / generator anyị mere nwere ike dakọtara na igwe mbụ.
N'ezie anyị nwere ike ime ka transducer / generator dochie Branson / dukane / rinco / herrman telsonic ịgbado ọkụ igwe, anyị nwekwara ike ime ka transducer / generator maka ngwa ọ bụla nke ngwa ultrasonic gị. Anyị na-enye OEM ọrụ maka oversea ahịa, anyị na-ama nwere abụọ OEM ahịa na USA na German.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na mpaghara ultrasonic, nabata kọntaktị Rps-sonic.